बैंकमा जानुअघि एउटा कलम लिएर जानुहोस् र यी ८ कुरामा ध्यान दिनुहोस ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/बैंकमा जानुअघि एउटा कलम लिएर जानुहोस् र यी ८ कुरामा ध्यान दिनुहोस !
कोरोना भाइरसका कारण हामि हरेका ठाँउमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ यसैक्रममा हामिले सामाजिक संजलको सहयोगमा केहि टिप्स प्रस्तुत गरेका छाै ।
-बैंकको ढोका सकभर आफै नखोल्नु होस, (गार्ड दाईलाई भन्नुहोस) खोल्नै परे ढोकाको नयाँ ठाँउमा (हेन्डल बाहेक अन्य ठाँउमा ) समाएर ठेल्नुहोस् वा तान्नुहोस।
-बैंकमा राखिएको सेनिटाईजर हातका औँला, हत्केलामा मात्र होइन नाडी सम्म प्रयोग गर्नुहोस।
-यदि बैकमा भिड देख्नु भयो भने, फरक्क फर्कनु होस । खाली भए पछि मात्र बैँक भित्र छिर्नुहोस।
-पालो छिट्टै आउँदैछ भने सकभर छुट्टै उभिनु होस, बैंकको बेन्च प्रयोग नगर्नुहोस, गर्नै परेमा फराकिलो ग्यापमा बस्नु होस,
बस्दै गर्दा हातले बेन्चको हेन्डल नछुनुहोस। बैंकका हरेक कुरा छुनुभन्दा पैला कोरोना हुन सक्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखी सावधानी अपनाउनुहोला ।
-सकभर चेक घरमै भरेर ल्याउनुहोस । बैंकको भौचर डेक्सको प्रयोग नगर्नु होस । गर्नै परे सावधान अपनाउनु होस । प्रयोग पछि आफ्नो पालो कुर्ने बेला सम्म खल्तिमा चेक राख्ने, हातले आँखा मिच्ने, जस्ता काम नगर्नुहोस।
-क्यासीयर लाई चेक दिनु भन्दा पहिला चेकको पछाडि क्यासीयरले देख्ने गरि दुईवटा सहि र मोबाईल नम्बर लेखेर दिनुहोस । सकभर लेख्दा आफ्नै कलमको प्रयोग गर्नुहोस । काउण्टर डेस्कलाई नछोई उभिनु होस।
-क्यासीयर ले पैसा गनेको हेर्नुहोस, सकभर उसैसँग मनमनै गन्नुहोस । मेसिनमा गनेको पैसाको संख्या डीस्प्लेमा मा हेर्नुहोस, पैसा नगनी लैजानु भन्दा साबधानी अपनाउनुहोस।
– बैंकबाट जानु भन्दा पहिला फेरी सेनिजाईजर प्रयोग गर्नुहोस, ढोका आँफै नखोल्नु होस । पैसासँगै कोरोना आएको हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस।
-भौचर डेक्समा जानुहोस, सकभर आफ्नै कलमको प्रयोग गरि पुर्ण सावधानका साथ भर्नुहोस । तपाईँ दैनिक जसो बैंकमा जानुहुन्छ भने अलिकति भौचर मागेर लैजानुस। घरमै वा अफिसमै भरेर ल्याउनुहोस। त्यसो गर्दा अर्को पटक सबैले प्रयोग गरिरहेको भौचर डेक्स प्रयोग गरिरहनु पर्दैन।
-सकभर बैंकबाट फिर्ता पैसा लिनु नपर्ने गरि पैसा जम्मा गर्नुहोस।
-काउण्टर डेस्कलाई नछोई उभिनुहोस।
-आफ्नै खातामा रकम जम्मा गर्दैहुनुहुन्छ (र भाैचर लगेर फ्याँक्नुहुन्छ) भने भाैचर नलिनुहोस र मोबाईलमा मेसेज हेरेर ठिक रकम जम्मा भएनभएको हेर्नुहोस। यदि संस्था वा अन्य व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्दैहुनुहुन्छ भने भाैचर लिँदा साबधान रहनुहोस ।
-बैंकबाट जानु भन्दा पहिला फेरी सेनिजाईजर प्रयोग गर्नुहोस, ढोका आँफै नखोल्नु होस । भौचरसँगै कोरोना आएको त छैन, साबधान रहनुहोस ।
सकभर डिजिटल कारोबार गरौँ । सुरक्षित रहौँ ।
राम जन्मेको भारतसँग प्रमाण छैन : “तथ्य ‘लिक’ भएकोमा भारत अचम्मित”
नेपालमा आज थप ८९९ जनालाई कोरोना पुष्टि